Uhlelo lokusebenza lwe-VR namantombazane. Izingosi zokuxoxa ezibukhoma nabesifazane abaku-inthanethi nge-3D, amavidiyo angu-360 nemifanekiso. Mahhala, web, Iphone, Android. Ingxoxo yevidiyo ye-VR nabantu ongabazi namakhamera ewebhu aku-inthanethi
Nge-Flirtymania ungasula yonke imingcele kwezokuxhumana kanye nesipiliyoni sokuxoxa nabantu ongabazi ezingeni elihlukile. Zizwe ukuba khona kwentombazane enhle phambi kwakho nge-VR bukhoma cam show!
Yilungele ukubandakanyeka ngokushesha - ngobuchwepheshe be-VR awusavinjelwe ukubuka nje nokuxoxa kepha ungakuzwa nokuba khona kwentombazane enhle phambi kwakho.
Ingxoxo ye-VR cam izokuvumela ukuthi ungene egumbini lentombazane enhle ngokuchofoza okumbalwa nje. Ngomuzwa ongachazeki wobukhona bomuntu amantombazane ethu alungele kalula ukufeza zonke izifiso zakho zangaphakathi.
Igumbi lokuxoxa le-VR Cam
Izinto ezejwayelekile ziba ezingavamile ngamakhamera e-VR. Ngengxoxo ye-VR uzokwazi ukubona umzimba, ubuso, imilenze nayo yonke into oyifunayo ngokuphelele ngangokunokwenzeka. Khohlwa ngokusakazwa kwekhwalithi ephansi, sinikela ngokunikela ngekhwalithi yevidiyo engu-5K kuma-fps angama-90 nangu-120 - Onke amakhamera wewebhu e-VR acacile.
I-VR Chat enezingqinamba
Ayikho imikhawulo kuhlobo lwedivayisi. I-PlayStation VR, i-HTC Vive, i-Oculus Quest, i-Google Cardboard noma enye idivayisi - siqinisekisa ukufinyeleleka kusuka kunoma iyiphi idivayisi nesithombe sekhwalithi ephezulu kakhulu.
Ukuphepha okuphelele kwedatha nokungaziwa;
Isebenza kuwo wonke Amapulatifomu;
Izingxoxo zangasese nezomphakathi ezenziwa ngamantombazane online;
Amamodeli wengxoxo ye-VR
I-VR ithatha iminikelo nemisebenzi ekhokhelwayo iye ezingeni elilandelayo. Manje usungabuka ngokuphelele zonke izenzo kunoma iyiphi i-engeli. Zulazula ekamelweni bese uthola imizwa yangempela yobukhona bentombazane egumbini.
Ingxoxo yevidiyo yangempela ye-VR enobuhle obushisayo! Okuthakazelisa kakhulu, nobabili ningakhuluma ngasese, akekho noyedwa ozokwazi ukuphazamisa ukuzijabulisa kwenu ndawonye. Kuphela kuye, wena kanye nesipiliyoni sangempela esimangazayo. Ingxoxo yevidiyo yeFlirtyMania VR inohlelo oluqinile lokulinganisa, ngokungafani namanye amapulatifomu afanayo.
Xoxa nge-VR nabantu ongabazi